एमाले अधिवेशन : चितवनका ९८ मध्ये ८० वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व (पूरा सूचीसहित)
२ घण्टा अघि नेपालखबर
नेकपा एमालेको शनिबार भएको वडा अधिवेशनका क्रममा चितवनका करिब ८० वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। चितवनका ९८ मध्ये ८० वटा वडाको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको हो। बाँकी १८ वडामा अधिवेशन आइतवार हुने भएको छ। अध्यक्षमा सर्वसम्मत नभएपछि केही वडाहरुमा...
इङ्ल्याण्डको सानदार जित
२ घण्टा अघि लोकान्तर
टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ग्ल्याण्डले ६ विकेटको जित निकालेको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजविरुद्ध स्तब्ध पार्दै इङ्ग्लिस टोली विजयी भएको हो । आजको खेल डिफेन्डिङ च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजका लागि ब्याड लक रह्यो । कुनै पनि ब्याट्सम्यान...
मानव स्वास्थ्यका लागि दूध राम्रो कि दही ?
काठमाडौं -दूध र दही सजिलै जहाँ पनि पाइने खानेकुरा हुन् । यी दुवैको सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । तर दूधभन्दा दही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । दूधलाई अमिलो बनाएर दही जमाइने हो । यसमा भएका ब्याक्टेरियाका कारण...
अनुहारमा क्रिमको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुस् यी कुरा
सुन्दर छालाको लागि दाग, धब्बा हटाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि दैनिक क्रिमको प्रयोग गरिन्छ । महिला होस् वा पुरुष, सबैले क्रिमको प्रयोग गर्छन् । अनुहारका हरेक समस्या समाधानका लागि बजारमा कैयौँ क्रिम उपलब्ध छन् । क्रिमले छालालाई मोस्चराइज मात्र...
डन्डिफोरले मानिसलाई कुरूप त बनाउँछ । छालासम्बन्धी अन्य विभिन्न समस्या पनि निम्त्याउने गर्छ । त्यसैले डन्डिफोर आउन नदिन सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । तर, डन्डिफोर आइहाले के गर्ने त ? डन्डिफोरको समस्या हुनेले अनुहारलाई दिनको दुई–तीनपटक राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ ।...
५ खराब बानी, जसले छिट्टै बुढ्यौली निम्त्याउँछ
काठमाडौं — आजकलको व्यस्त जीवनमा मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने फुर्सद छैन । त्यसैले उनीहरू जंक फूडमा झुम्मिन्छन् । यस्ता फास्टफूड शरीरका लागि पटक्कै लाभदायक हुँदैनन् । यस्ता कुराको सेवनले छिट्टो बूढो भइन्छ । बूढो भएपछि दाँत र शरीर कमजोर हुन्छ,...
खाली पेटमा खानुस् कालो अंगुर, घट्छ माइग्रेनको खतरा
काठमाडौं—अंगुर गजबको फलफूल हो । यो मीठो भएपनि यसमा चिनीको मात्रा पटक्कै हुँदैन । अंगुरमा सबै आवश्यक पोषक तत्त्व जस्तै पानी, सोडियम, पोटेसियम, साइट्रिक एसिड, म्याग्नेसियम र आइरन हुन्छन् । अनेकौं रोगबाट अंगुरले जोगाउँछ । यहाँ हामी त्यस्ता रोगको चर्चा...
काँचो प्याज खाएमा निको हुन्छन् यी रोग
काठमाडौं — भोजनमा वा सलादका रूपमा खाइने प्याज स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । केही मानिस स्यान्डविच, चटनी तथा चाटका रूपमा पनि प्याज सेवन गर्छन् । तर प्याज त काँचै खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । सल्फर, अमिनो एसिड, एन्टीबायोटिक्स, फाइबर,...
बुटवलका सबै १९ वडामा एमालेको सर्वसम्मत नेतृत्व
नेकपा एमालेले बुटवल उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ। उक्त उपमहानगरपालिकाका सबै १९ वडामा शनिबार भएको अधिवेशनबाट अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो। अधिवेशनबाट अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र सदस्य पनि सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। एमाले...
टी-२० विश्वकप : इङल्यान्डसँग डिफेन्डिङ च्याम्पियनको लज्जास्पद हार
इङल्यान्डले टी -२० विश्वकप क्रिकेटमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ६ विकेटको जित दर्ता गरेको छ । सुरुवाती ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज इङल्यान्डको घातक बलिङसामु निरीह देखिएको थियो । कुनै पनि ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा १४ ओभरमा केवल ५५ रनमै वेस्ट इन्डिज...
३ घण्टा अघि लोकान्तर
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी धुलिखेल नगर कमिटीले शनिवार धुलिखेलमा आयोजना गरिएको ‘दिपावली, छठ र नेपाल संवत अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री । तस्वीरु, रासस
धान जोगाउने प्रयास
अविरल वर्षाका कारण काटेको धान भिजेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुरस्थित खेतमा कृषकले सुकाएको धान । काटेको धान पानीले भिजेपछि अधिकांश कृषकले ठूलो क्षति बेहर्नु परेको छ । तस्वीर, रासस
याक दुहुँदै जेष्ठ किसान
चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा पर्ने ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ मौवाटारस्थित याक गोठमा दुहुनो याक दुहुदै एक जेष्ठ किसान । तस्वीर, रासस
डेल्टा प्लस भेरियन्ट झन् चाडो फैलिने निश्कर्ष
बेलायतको एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय (युकेएचएसए) ले डेल्टा प्लस भेरियन्ट झन चाडो फैलिने निश्कर्ष निकालेको छ । सो निकायका अधिकारीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा लामो समयको अध्ययनबाट यस्तो निश्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ । यस बारेमा थप अध्ययन अझै भइरहेको...
दक्षिण कोरियाका ७० प्रतिशतले पाए कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप
दक्षिण कोरियाका ७० प्रतिशतभन्दा बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् । दक्षिण कोरियाली रोग नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले दुवै खोप लगाएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले अर्को हप्तासम्ममा यो सङ्ख्या ८५...
‘जनताको अकाङ्क्षा कांग्रेसले पूरा गर्छ’
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले जनताको अकाङ्क्षा नेपाली कांग्रेस पार्टीले मात्र पूरा गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् । कांग्रेस सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ ले आज चतरामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा मन्त्री खड्काले भने, “अब जनताको अकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि कांग्रेस आवश्यक छ ।”...
स्वामी श्रीनिश्चलानन्द आइतबार नेपाल आउँदै
जगन्नाथपुरीस्थित गोवद्र्धन मठका शङ्कराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्द आइतबार नेपाल आउँदै छन् । भैरहवामा आयोजना गर्न लागिएको धर्मसभालाई सम्बोधनका लागि स्वामी श्रीनिश्चलानन्द नेपाल आउन लागेका हुन् । भैरहवाको महेन्द्रसभा गृहमा हुने धर्मसभामा सहभागी हुनेगरी नेपालका सनातन धर्म तथा ओमकार परिवारका विद्वान भैरहवा...
नेपाल एयरलाइन्सले धनगढीबाट बझाङ र डोटीमा उडान गर्ने
३ घण्टा अघि नेपालखबर
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाई यात्रुको चाप बढेपछि नेपाल वायुसेवा निगमले धनगढीबाट बझाङ परीक्षण उडान गर्ने भएको छ। धनगढीलाई बेस बनाएर जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आइतबार परीक्षण उडान हुने भएको हो। लगातारको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि हवाई...
कोरोनाको डेल्टा प्लस भेरियन्ट झन चाँडो सर्ने
बेलायतको एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय (युकेएचएसए) ले डेल्ट प्लस भेरियन्ट झन चाडो फैलिने निष्कर्ष निकालेको छ । सो निकायका अधिकारीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा लामो समयको अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ । यस बारेमा थप अध्ययन अझै भइरहेको...
जिल्ला अस्पतालमा विद्युुत आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या
३ घण्टा अघि थाहाखबर
बझाङ : जिल्ला अस्पताल बझाङमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। लगातारको बर्षाका कारण गएको बाढीपहिरोले बझाङ जोडने राष्ट्रिय प्रसारण लाईन अवरुद्ध भएको छ। विधुत सेवा अवरुद्ध हुँदा अक्सिजन, नेवुलाइजर, शल्यक्रिया, एक्सरे, भिडियो एक्सरे जस्ता उपकरण...
नुवाकोटमा एकैदिन ५८ कोरोना संक्रमित थपिए
नुवाकोटमा शनिबार एकै दिन कोरोनाका ५८ जना नयाँ संक्रमित थप भएका छन् । योसहित जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ७६ जना पुगेको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको स्वाबको त्रिशूली अस्पतालको आरडिटी, पिसिआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण र शंकास्पद लक्षणसहित उपचारका...
सिंगापुरले नेपालसहित पाँच मुलुकमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हटायो
सिंगापुरले नेपाल र भारतसहित पाँच एसियाली मुलुकका नागरिकलाई यसअघि लगाएको भ्रमण प्रतिबन्ध हटाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार जनाअनुसार नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलंकन नागरिकले सिंगापुर प्रवेश गर्न तथा त्यहाँको ट्रान्जिट हुँदै अन्यत्र यात्रा गर्न सक्नेछन्। यो निर्णय आगामी...
एमालेको करिब ६ हजार वडा कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न
नेकपा (एमाले)ले आज देशभरि एकैसाथ करिब छ हजार वडा कमिटीको अधिवेशन गरेको छ । एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बाढी, पहिराका कारण केही जिल्लाबाहेक करिब छ हजार वडा कमिटीको अधिवेशन आज गर्न थालिएको जानकारी दिए । “करिब छ हजार वडा...
नुवाकोटमा एकैदिन ५८ नयाँ सक्रमित थपिए
नुवाकोटमा आज कोरोनाको ५८ जना नयाँ सङ्क्रमित थप भएका छन् । योसहित जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७६ जना पुगेको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको स्वाबको त्रिशूली अस्पतालको आरडिटी, पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण र शङ्कास्पद लक्षणसहित उपचारका लागि सोही...